Eritreretinao ve ny orinasa iray, tetikasa na fanangonam-bola?
Mifandraisa aminay Afaka manampy anao izahay
Efa manana orinasa, tranonkala na tetikasa izay tsy miasa ve ianao?
Moa ve ny orinasanao, ny tranonkala na ny tetikasam-panafody, tsy nahomby na efa akaiky ve?
Raha te "hanao izany ianao" dia afaka miditra amin'ny vokatra informatika
Mangataha toro-hevitra amin'ny Skype 30 Free Skype
Raha mila fanampiana sy tari-dalana kely izahay dia eto ho anao.
Raha fohy ny andronao dia miahy ny zava-drehetra izahay !!
Carl Henry Global sa. (Voasoratra ao amin'ny Seychelles - Company No. 07816855) ao amin'ny 117 Orion Mall Palm Street Victoria Mahe Seychelles. Carl Henry Global sa. ary misy Ny orinasa orinasa Carl Henry dia orinasa tsy nahazo alalana avy amin'ny Fitondram-panjakana ara-bola any UK na any amin'ny fitantanana ara-bola hafa iraisam-pirenena ary tsy afaka ary tsy manome toro-hevitra amin'ny fampiasana vola. Tsy misy na inona na inona ato amin'ity tranonkala ity na ny antontan-taratasy Download afaka natao na tokony atao "fampiroboroboana ara-bola" amin'ny dikan'ny fizarana 21 ao amin'ny Financial Services and Markets Act 2000 ao Angletera, na tokony horaisina ho fanasana, famporisihana na fanolorana hiditra amin'ny asa fampiasam-bola. Ity tranonkala ity dia ho an'ny tanjona amin'ny fampahalalam-baovao ihany, ary tsy natao, na tsy izany, fa torohevitra fampiasam-bola na fangatahana hividy, hividy na hivarotra vola na fitaovana ara-bola hafa. Tsy misy Carl Henry Global sa. ny mpiara-miasa aminy na ny talen'ny tale, ny mpiandraikitra ary ny mpiasa dia hanaiky ny mety ho vokatry ny fiankinan-doha na ny fihetsiketsehana mifototra amin'ny fampahalalana rehetra ao amin'ity tranonkala ity na ireo antontan-taratasy nalefa avy aminy. Manoro hevitra izahay fa alohan'ny handraisanao fanapahan-kevitra fandraisana anjara dia mandray toro-hevitra avy amin'ny mpanolotsaina mety ianao. Ho fampahalalana bebe kokoa amin'ny fifandraisana info@carlhenryglobal.com
Ity Dokam-barotra ity dia navoakan'i Carl Henry Global sa. ("CHG"), ho an'ny tombotsoan'ny fandraisana anjara. Tsy misy olona nahazo alalana sy fehezin'ny fehezan-dalàna momba ny raharaha ara-tsosialy sy ara-barotra UK 2000 ("FSMA") dia nangatahina mba hanekena ny votoatin'ity tranonkala ity na ny doka nalefany avy amin'izany. Azo alaina ao amin'ny United Kingdom izy io noho ny fampiroboroboana ara-bola tsy misy fepetra ao amin'ny Financial Services sy Markets Act 2000 (Financial Promotion) Ordinateur 2005 (ny "FPO"), noho izany dia natao ho an'ny olon-tsotra sy ara-nofo fotsiny ihany ny UK izay latsaka an-katerena noho ny lahatsoratra 19 (mpampiasa vola mpaninjara) na ny lahatsoratra 49 (orinasa avo lenta sy ny fikambanana) ao amin'ny FPO. More specifically:
Carl Henry Global sa. dia tsy fehezin 'ny tompon'andraikitry ny fitondram-bola ara-bola, na amin'ny fitantanana ara-bola hafa ao Angletera na any ampitan-dranomasina. Ny mpandray anjara dia tsy manan-jo hanangona fitarainana amin'ny mpitsoa-ponenana ara-bola ao Angletera, na amin'ny toe-javatra mety havoakan'ny Carl Henry Global sa. mba hitakiana ny rafitra momba ny famatsiam-bola ara-bola. Ity taratasy ity dia tsy voatery hanaraka ny fenitra araky ny famolavolana na ny votoaty ho an'ny Prospectus mifanaraka, araka izay voafaritra ho an'ny tanjon'ny Fifanarahana Prospectus an'ny Fitantanam-bola ara-bola an'ny UK ("FCA"), satria ilaina ny fandraisana anjara amin'ny tolotra voalaza eto. ho an'ny vola mihoatra ny € 100,000 isaky ny mpampiasa vola.